Visual Ip Imewe
Satọdee 2 Julaị 2022
Visual Ip Imewe Project Yellow bụ ihe osise zuru oke nke na-ewulite echiche a na-ahụ anya nke Ihe niile bụ Yellow. Dabere na ọhụụ isi, a ga-eme ngosipụta ndị dị n'èzí n'obodo dị iche iche, a ga-emepụta usoro ọdịbendị na nke okike n'otu oge. Dị ka IP na-ahụ anya, Project Yellow nwere ọhụụ na-akpali akpali na atụmatụ ụcha dị ukwuu iji mepụta ọhụụ igodo nke jikọtara ọnụ, nke na-eme ka ndị mmadụ ghara ichefu. Kwesịrị ekwesị maka nkwalite ntanetị buru ibu na ntanetị na ntanetị, yana nsonaazụ nke ihe ndị a na-ahụ anya, ọ bụ ọrụ nrụpụta pụrụ iche.
Fraịdee 1 Julaị 2022
Ime Ụlọ A na-ewere agba agba ntụ dị ka ihe na-agwụ ike. Mana taa ụcha a bụ otu sitere na ndị isi-isi n'ụdị dị ka loft, minimalism na hi-tech. Agba awọ bụ agba nke mmasị maka nzuzo, ụfọdụ udo na izu ike. Ọ na - akpọkarị ndị ahụ, ndị ha na ndị mmadụ na - arụ ọrụ ma ọ bụ na - arụ ọrụ nyocha, dịka ụcha ime ụlọ niile. Mgbidi, uko ụlọ, arịa ụlọ, ákwà mgbochi, na ala na-agba ntụ. Ugwu na agba agba nke isi awọ dị naanị. Nkọwa na ngwa ndị ọzọ agbakwunyere ọla edo. Ihe osise a na-eme ka ọ daa n'ihu.
Njirimara Akara Banyere Akara
Tọọzdee 30 Juun 2022
Njirimara Akara Banyere Akara Ihe mkpali maka imeghari ohuru a na imeghari ohuru bu mgbanwe nke ndozi ohuru na imekorita na omenala ulo oru. Designkpụrụ nke obi enweghị ike ịbụ ihe mpụga na ika ahụ, na-akpali mmekọrịta na ndị ọrụ, ma ndị ahịa. Njikọ njikọ n'etiti uru, ntinye ọnụ na ogo ọrụ. Site na udi rue na agba, ihe osise ọhụrụ ahụ jikọtara obi n’ime B na obe ike na T. Okwu abụọ ejikọtara n’etiti na-eme ka akara ngosi dị ka otu okwu, otu akara, na-ejikọ R na B na obi.
Wenezdee 29 Juun 2022
Ihe Eji Nhazi maka akara EXP Brasil sitere na ụkpụrụ nke ịdị n'otu na mmekorita. Dabere na ngwakọta dị n'etiti teknụzụ na imewe na ọrụ ha dị ka ndụ ọfịs. Ihe edere ede na egosiputa njikọ na ike nke ulo oru a. Akwụkwọ ozi X a siri ike ma jikọta ya mana nke ukwu na ọkụ. Ihe ngosi a na-anọchite anya ndu Studio, ya na ihe di n’ime leta ya, ma n’ebe di mma ma odi nma nke juputara ndi mmadu na imewe ya, ndi mmadu na ndi n’otu n’otu, odi mfe na nka na uzu, ihie na nke siri ike, ndi oru aka ya.
Tiuzdee 28 Juun 2022
Ewu Kọfị Waslọ akwụkwọ abụọ nke mmalite narị afọ nke 20 German Bauhaus na Russian avant-garde sitere n'ike mmụọ nsọ. Geometry kwụ ọtọ na arụ ọrụ a ga-echebara echiche nke ọma kwekọrọ na mmụọ nke oge ahụ: "ihe dabara adaba mara mma". N'otu oge ahụ na-eso ọnọdụ nke ugbua onye mmebe na-agwakọta ihe abụọ iche na ọrụ a. Oge gboo nke mmiri ara ehi na-acha ọcha na-enye nkwado site na ihe mkpuchi na-egbuke egbuke nke cork. Ọrụ dị mfe, ejiri adaba na njiri arụ ọrụ ụdị ahụ na-akwado ọrụ a.
Mọnde 27 Juun 2022
Ụlọ Iji osisi dị ka ihe bụ isi na-arụ ọrụ, ụlọ ahụ na-achụpụ ọkwa abụọ ya na ngalaba, na-ekepụta elu ụlọ na-adọrọ adọrọ ka ọ bụrụ ihe jikọrọ ya na ikwe ka ọkụ eke ịbanye. Oghere dị okpukpu abụọ gbara okpukpu abụọ na-egosipụta mmekọrịta ahụ n'etiti ala, elu ụlọ na odida obodo. Elu ụlọ n’elu ihe ọkụ igwe na-efe efe, na-echebe ya pụọ n’ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ ma na-ewughachi elu ya, na-akpụkwa ọhụụ nke gburugburu ebe obibi. Ihe mmemme a gosiputara site na ichota ihe ndi mmadu na ala ulo na ihe nkeonwe na elu ulo.
Nhazi nke ubochi
Zingtụnanya. Ezigbo atụmatụ. Nhazi kachasị mma.
Satọdee 25 Juun 2022
Designskpụrụ dị mma mepụtara uru maka ọha mmadụ. Kwa ubochi anyi n’egosiputa ihe nlere puru iche nke n’egosiputa lence kachasi nma. Taa, anyị nwere obi ụtọ igosipụta atụmatụ mmeri nke na-eme ezigbo mgbanwe. Anyị ga-egosipụta ọtụtụ atụmatụ dị egwu ma na-akpali akpali kwa ụbọchị. Gbalia ileta anyi kwa ubochi iji kirie ihe omuma ohuru ohuru na oru ndi okacha amara n’uwa dum.
Visual Ip Imewe Ime Ụlọ Njirimara Akara Banyere Akara Ihe Eji Ewu Kọfị Ụlọ